ကြီးထွားလာသည့် beets - ကျဆုံးခြင်းနှင့်နွေ ဦး ပေါက်ရာသီအတွက်အမြစ်ထွက်သီးနှံများ - စားသုံးဆီ
Beets: Quick Care လမ်းညွှန်
အကြံပြု Beet အမျိုးမျိုး
ဘယ်အချိန်မှာ beets စိုက်ရန်
ရေလောင်း & စိုထိုင်းဆ
လတ်ဆတ်သော beets သိမ်းဆည်းခြင်း
မှိုနှင့် Oomycete ရောဂါများ
Q: beeturia ဆိုတာဘာလဲ။ အန္တရာယ်ရှိသလား။
သုပ်အရက်ဆိုင်များတွင်ထူးဆန်းသောအနီရောင်အရာများအဖြစ် Beets သည်နှစ်များတစ်လျှောက်မကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုရခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အိမ်တွင် beets ကြီးထွားရန်လွယ်ကူပြီးပျော်စရာကောင်းသည်!
သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အစင်းပုံစံအပါအဝင်အရောင်မျိုးစုံရရှိနိုင်ပါက beets သည်ဗီတာမင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောပိုတက်စီယမ်၊ မန်းဂနိစ်၊ ဖောလိတ်နှင့်ဗီတာမင် B2 တို့သည်ကယ်လိုရီနည်းပါးသည်။ ထိုသူတို့ကအရသာပါပဲ။
ငါတို့ရှိသမျှသည် beets သောအရာတို့ကိုစွန်းထင်းသောကြောက်မက်ဘွယ်သောပုံပြင်များကြားဖူးတယ်, သူတို့ကစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ beets အနီရောင်ကိုဆိုးဆေးတစ်မျိုးအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် beets အားလုံးတွင်ဂန္ထဝင်နီ - ခရမ်းရောင်အရောင်များရှိသည်မဟုတ်ဘဲများစွာသောအညစ်အကြေးကင်းစင်သည်။
ငါသူတို့အရသာနေသေးဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သလား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအနေဖြင့်ချက်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ သုပ်များပေါ်တွင်တင်ထားသည်ဖြစ်စေပဲ beets များသည်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုလွယ်ကူသောထပ်ပေါင်းထည့်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားရန်လုံလောက်သောစပ်စု? မင်းဖြစ်သင့်တယ် နှိမ့်ချ beet နှင့်ပတ်သက်။ သိရှိရှိသမျှအရာအားလုံးကိုစူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။ သငျသညျငါမှတဆင့်နေအချိန်အားဖြင့်ငါကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်!
ကြီးထွားလာ beets များအတွက်ကောင်းသောထုတ်ကုန်:
အန္တရာယ်ကင်းသောအမှတ်တံဆိပ် Yard & ဥယျာဉ်မှုန်ရေမွှား
လူအသုံးအများဆုံးအမည် beet, ဥယျာဉ် beet, beetroot, စားပွဲပေါ်မှာ beet, beet အနီရောင်, ရွှေ beet, beet အဖြူ
သိပ္ပံနည်းကျအမည် Beta vulgaris subsp ။ vulgaris var ။ conditiva
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အချိန် 5-10 ရက်
ရိတ်သိမ်းရန်နေ့ရက်များ cultivar ပေါ်မူတည်။ 45-65
အလင်း နေရောင်ကိုအပြည့်အ ၀ နှစ်သက်သည်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်ကိုသည်းခံနိုင်သည်
ရေ တစ်ပတ်ကို ၁ ခလောက်
အပူချိန် Cooler အပူချိန်, 60-75 ဒီဂရီအကောင်းဆုံး
မြေဆီလွှာ Loamy သည်ကောင်းစွာရေဖျော်သဖြင့်သဲမြေကိုလက်ခံနိုင်သည်
ပိုးမွှား အပ္ဖီးများ၊ အရွက်အလှူရှင်များ၊ အရွက်မိုင်းလုပ်သားများ၊
ရောဂါများ cercospora အရွက်အစက်အပြောက်, Rhizoctonia & Pythium damping-off, Fusarium အဝါရောင် & အမြစ်ပုပ်, Aphanomyces အမြစ်ပုပ်, အမှုန့်များအနာ, downy အနာ, ဘက်တီးရီးယားအရွက်အစက်အပြောက်, ဘက်တီးရီးယားအနာဖေး, beet ကောက်ကောက်ထိပ်တန်းဗိုင်းရပ်စ်, beet အနောက်ပိုင်းအဝါရောင်ဗိုင်းရပ်စ်
အစိမ်းရောင်နှင့်ဥယျာဉ် beet ၏အမြစ်များနှစ်မျိုးလုံးစားသုံးနိုင်သောဖြစ်ကြသည်။
Beta vulgaris subsp ။ vulgaris beet ရဲ့ရုက္ခဗေဒနာမကိုအမှီ, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဖုံးလွှမ်း။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ beet အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ ငါ beetroot & ဥယျာဉ်ကို beet အာရုံစိုက်နေစဉ်, အလားတူဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသော cultivars ၏မိသားစုများတစ်ခုလုံးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြီးထွားလာအလေ့အထအတွက်အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အချို့သော beet မျိုးစိတ်များကိုတိရိစ္ဆာန်အစာအတွက်အသုံးပြုသည်။ အခြားသူများကိုကြံကိုအစားသကြားထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုကြသည်။ အချို့သောပုံစံများကိုသူတို့၏သစ်သီးသစ်ရွက်များအတွက်စိုက်ပျိုးပြီးအစားအစာအဖြစ်အဓိကထားသည်။ microgreens ကိုက် အရသာရှိပါတယ်။ နှင့်အညီ, အမြစ်လည်းအတော်လေးအရသာရှိနိုင်ပါသည်။
စုစုပေါင်းပဲ beets သည်စီးပွားရေးအရ Caryophyllales အမိန့်၏အထင်ရှားဆုံးသီးနှံဖြစ်သည်။ ဒီအမိန့်မှာ cacti ပါဝင်တယ် ဂရုစိုက်ပါ , ရေခဲပင်များ, amaryllis, များစွာသောအသားစားအပင်များနှင့် beet အပင်အားလုံးပုံစံများ။
beets အကြားကွဲပြားခြားနားသော cultivars အုပ်စုငါးခုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
နက်ရှိုင်းသောအုပ်စု (Beta vulgaris ssp ။ Vulgaris var ။ Altissima) ဒါမှမဟုတ် သကြား beets: အဆိုပါ 1700 ရဲ့ဂျာမနီမှာအစပြုခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကြံအစားသကြားထုတ်လုပ်ရန်ထမြောက်တော်မူ။
Flavescens အုပ်စု (Beta vulgaris subsp ။ vulgaris var ။ flavescens) ဒါမှမဟုတ် ဆွစ်ဇာလန် 'ဆွစ်' အမည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းမြေထဲပင်လယ်မှလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
Cicla အုပ်စု (Beta vulgaris subsp ။ vulgaris var ။ cicla) ဒါမှမဟုတ် ဟင်းနုနွယ်ရွက် beet / chard: ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ဆင်တူသောခေါင်းပေါ်တွင်ပုံသဏ္ဌာန်ထွက်ပေါ်လာသည့်နောက်ထပ်လူကြိုက်များသောသစ်ရွက်စိမ်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှအစပြုသည်။
စုစုပေါင်းအုပ်စု (Beta vulgaris ssp ။ Vulgaris var ။ Thick) ဒါမှမဟုတ် အမြစ်ချို့တဲ့: ယူကေ၊ အိုင်ယာလန်နှင့်စကော့တလန်တစ်လျှောက်တွင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ လူသားများစားသုံးရန်စားသုံးနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသည်။
Conditiva အုပ်စု (Beta vulgaris subsp ။ vulgaris var ။ conditiva) ဒါမှမဟုတ် beetroot / ဥယျာဉ် beet: ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုနေရာချရန်ခက်ခဲသော်လည်းဗြိတိန်မှအရှေ့ဥရောပအထိကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရည်ညွှန်းသောအခါ beet ဟုခေါ်လေ့ရှိပြီးသစ်ရွက်များနှင့်စားသုံးနိုင်သောအမြစ်များကိုထုတ်လွှတ်သည်။
ဒီမိသားစုကျယ်ပြန့်သည်နှင့်အမျှယနေ့ငါ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် Conditiva cultivar group ကိုငါစွဲမြဲသွားမည်။ ဒါပေမယ့်ငါအနာဂတ်မှာ chards, mangelwurzels နှင့်သကြား beets ပြန်လည်လည်ပတ်လိမ့်မယ်သေချာပါတယ်!
Beets သည်ရွှေ၊ အဖြူနှင့်အနီရောင်များကိုအခြေခံအရောင်သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။
များသောအားဖြင့် beet အမြစ်များသည်အရောင်နှင့်နီသောအနီမှဖြစ်သည်။ ဘီတာနင်ပါဝင်သောသဘာဝဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သောကြောင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ အစားအစာအရောင်တင်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။
beet အနီရောင်အမျိုးပေါင်းအများစုတွင်ပင်စည်ကိုတိုးချဲ့သောအနီရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်အနည်းငယ်ရှိသည်။ အနည်းငယ်တွင်ပင်အရွက်၌ခရမ်းရောင်သွေးပြန်ကြောရှိသည်။
ရွှေနှင့်အဖြူရောင် beets များသည်“ သွေးထွက်” ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပွားနေသောဘီတာနင်ပမာဏသည်များစွာနိမ့်ကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ပန်းရောင်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အဝတ်စွန်းလာပြီစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရွှေ beets များသည်အမြစ်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အဝါရောင်ပင်များရှိသည်။ beets အဖြူများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရွက်များ၊
နာမည် ရင့်ကျက်ဖို့နေ့ရက်များ ဖော်ပြချက် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
အစောပိုင်း Wonder ၄၅ ရက် 3-4″ နက်ရှိုင်း။ တောက်ပြောင်သောအစိမ်းရောင်အနီများနှင့်အစာစားရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ကောင်းစွာချဉ်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Merlin ၄၈ ရက် 3″ ပတ်ပတ်လည်အမြစ်များကိုသကြားပါ ၀ င်သည့်အရာများထုတ်လုပ်သော Hybrid ။ အရွက်အစက်အပြောက် & မှိုမှကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Boro ရက်ပေါင်း ၅၀ Cercospora ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ချောမွတ်သောအသားအရေ၊ ကြီးမားသောကျန်းမာသစ်ရွက်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Red Ace ရက်ပေါင်း ၅၀ လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည့်ယူနီဖောင်းအမြစ်များ၊ ချို။ နူးညံ့။ ပင်။ အဘို့အကောင်းအစိမ်းရောင်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
ပတ္တမြားဘုရင်မ ၅၅ ရက် ညံ့ဖျင်းသောမြေဆီလွှာတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အစောပိုင်းထွက်ရှိသည့် beet ။ စည်သွပ်ဘူးစက်မှုလုပ်ငန်းအကြိုက်ဆုံး။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Chioggia Guardsmark ၅၅ ရက် ပန်းရောင် - အစင်းများနှင့်အလယ်အလတ်အမြင့်ထိပ်များ။ Beet root သည်အစင်းကြောင်းနှင့်အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပစ်မှတ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Crosby ရဲ့အီဂျစ် ၅၅ ရက် အမေရိကန်ကို ၁၈၆၉ တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သောအသား၊ အရသာကောင်းသော။ မျိုးစေ့များရယူပါ
ဒက်ထရွိုက်အမှောင်နီ ၅၆ ရက် ၁၈၉၂ ခုနှစ်တွင်အလှည့်ကျဥယျာဉ်မှ ၃ ets ပတ်ပတ်လည် beets ထုတ်လုပ်သည်။ အေးခဲပြီး ၄၀ ဒီဂရီမြေဆီလွှာအပူချိန်အထိနိမ့်ကျနိုင်သည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
နွားရဲ့သွေး ရက်ပေါင်း ၆၀ အလားတူ - ဖုံးလွှမ်းအမြစ်ကျော်အနီရောင် - ခရမ်းရောင်ထိပ်။ microgreens (သို့) 2-3″ beet အမြစ်များအတွက်လူကြိုက်များသည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Burpee ရဲ့အနီရောင် Ball ကို ရက်ပေါင်း ၆၀ ဂန္ Burpee အမျိုးမျိုး။ အမျိုးမျိုးသောရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်အလွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကောင်းမွန်သောအရသာရှိသည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
ဆလင်ဒါ ရက်ပေါင်း ၆၀ Formanova လို့လည်းခေါ်တယ်။ အရှည် 1880 ရဲ့အမှေအပေါငျး, ဆလင်ဒါနှင့် 6-9 '။ အနီရောင် လွယ်ကူသောဖြတ်ခြင်းနှင့်အခွံ! မျိုးစေ့များရယူပါ
ကျောက်စိမ်း ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြမ်းတမ်းသော၊ အခေါက်ကဲ့သို့သောအသားအရေနှင့်နက်ရှိုင်းသောအနီနက်သောအသားနှင့်ရှည်လျားသောမုန်လာဥပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောအမြစ်များ။ အလွန်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် မျိုးစေ့များရယူပါ
စွန် ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြီးထွားလာပူအခွအေနေအဘို့အဖွံ့ဖြိုး။ တင်းတင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်, အစိမ်းရောင်ကျန်းမာသန်စွမ်းကြသည်။ Excellent က texture & အရသာ။ မျိုးစေ့များရယူပါ
အနီရောင်ကြိတ်စက် ရက်ပေါင်း ၆၀ နက်ရှိုင်းသောစပျစ်ရည်ကို - ခရမ်းရောင်စပျစ်ရည်ကို - အနီရောင်အရောင်မှ။ 1″ ကလေး beets များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ လှပသောအစိမ်းရောင်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Lutz အစိမ်းရောင်အရွက် ၆၅ ရက် pithy သို့မဟုတ် Woody မပါဘဲ 6″ အရွယ်အစားရောက်ရှိနိုင်သည်! Fuschia- သွေးပြန်ကြောအစိမ်း, ကောင်းသောသိုလှောင်မှုအမြစ်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
အနီအနက်ရောင်ပတ်ပတ်လည် ၆၅ ရက် ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံမျိုးစုံသည်ဘော့ချ်နှင့်အလားတူဟင်းလျာများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းသိုလှောင်မှု beet ။ အလွန်မှောင်မိုက်သောအနီ။ မျိုးစေ့များရယူပါ
ရွှေ beet အမြစ်များ၏အရေပြားသည်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အဝါရောင်အတွင်းပိုင်းကိုဖုံးကွယ်ထားလေ့ရှိသည်။
နာမည် ရင့်ကျက်ရန်နေ့ရက်များ ဖော်ပြချက် ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
ပို ၅၁ ရက် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရွှေအသားနှင့်အတူလိမ္မော်ရောင်အရောင်အမြစ်အပြင်ပန်း။ အဝါရောင် - အစိမ်းရောင်အလင်း - အစိမ်းရောင်ထိပ်များ။ အလွန်အရသာရှိတယ်။ ကောင်းစွာဖျော်ရည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
ရွှေ ၅၅ ရက် 1820 ရဲ့အမှခေံ။ သွေးထွက်သို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းမထားဘူး! အရသာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ရွှေရောင်အဝါရောင်အသားများ။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Burpee ရဲ့ရွှေ ၅၅ ရက် 55 ရက် - ချို, ပျော့အရသာနှင့်အတူ 1940 ရဲ့ခေတ် beet ။ ၂″ taproots ။ ဥယျာဉ်တော်၌အမှန်တကယ်လူကြိုက်များ beet ။ မျိုးစေ့များရယူပါ
မှတ်ကျောက်ရွှေ ၅၅ ရက် အရွက်များနှင့်ပင်စည်များသည်ရွှေရောင်အမြစ်အတွင်းပိုင်းနှင့်အတူအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအပင်ပေါက်ရန်အတွက်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Albino ၅၅ ရက် ဟော်လန်ကနေအမှေအရိပ်။ အဖြူ၊ အစိမ်းရောင်လည်းအရသာရှိတဲ့။ သကြားထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မျိုးစေ့များရယူပါ
Avalanche ၅၅ ရက် နှင်းဖြူအမြစ်များ၊ မွှေးကြိုင်ပြီးအချင်း ၂-၃ လက်မ။ ထိပ်ပိုင်းသည်အစိမ်းရောင်အရွက်များဖြင့်အစိမ်းဖျော့ဖျော့ဖြစ်သည်။ သွေးထွက်ခြင်းမရှိပါ မျိုးစေ့များရယူပါ
ဒါက chore ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ တကယ်တော့၊ သင်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိလျှင်ကြီးထွားလာသည့် beets ကိုကြိုးစားရန်ဤမျှကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရသည့်အတွက်သင်တွေးမိလိမ့်မည်။
beets သည်အေးမြသောအပူချိန်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဆောင်း ဦး ရာသီသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီများတွင်မကြာခဏစိုက်ပျိုးကြသည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌, သင်ပထမ ဦး ဆုံးမျှော်လင့်ထားနှင်းခဲမတိုင်မီ 8-10 ပတ်ကြာစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဆောင်းရာသီအစောပိုင်းတွင်သင့်အား beets ကောင်းကောင်းရသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နှင်းခဲကင်းသောဇုန်တွင်နေထိုင်ပါကဆောင်းတွင်းတစ်ပတ်လျှင်သုံးပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်သီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သင်၏ beets များကိုအိမ်တွင်း၌စတင်ပြီးကောင်းသောအပင်ပေါက်ရန်အတွက်အိမ်ပြင်တွင်ရွှေ့ပြောင်းပါ။
နွေ ဦး ရာသီ၌, beets အဖြစ်မကြာမီမြေဆီလွှာအလုပ်လုပ်နိုင်သကဲ့သို့။ အလွန်ရွှံ့သောအခြေအနေများကိုရှောင်ပါ။ သင်သည်သင်၏အစေ့များကိုအိမ်တွင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အစားထိုးနိုင်သည်။
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်မြေဆီလွှာအပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီသို့မဟုတ်ထိုထက်မြင့်သောအချိန်တွင်သာဖြစ်ပွားသည်။ သငျသညျရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားလုံး beets ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်ဆိုရင်, စိတ်ကိုထားပါ!
beets ကွန်တိန်နာတွင် beets ကြီးထွားနေလျှင်, အနည်းဆုံး 12″ အနက်ရှိသူများကိုရွေးချယ်ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့သင်ဟာနေအပြည့်ဝန်းပတ် ၀ န်းကျင်မှာ beets ကိုစိုက်ချင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်အခြေအနေများတွင်လည်းကြီးထွားနိုင်သည်။ သို့သော်နေရောင်အပြည့်သည်ကျန်းမာသောအမြစ်များနှင့်အစိမ်းရောင်များကိုတိုးပွားစေသည်။
ကွန်တိန်နာများတွင်စိုက်လျှင်အနည်းဆုံး ၁၂″ အနက်ရှိကွန်တိန်နာများကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများအတွက်နေရာလွတ်ပေးသည်။
ငါ beets စိုက်လို ထမြောက်တော်မူအိပ်ရာဥယျာဉ်တော် , ဒါပေမယ့်သူတို့ကမြေပြင်၌တိုက်ရိုက်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သင်၏မြေဆီလွှာကိုရွှံ့ပုံစံဖြစ်ပါကဆွေးဖြင့်ပြုပြင်ပါ။ ကောင်းမွန်သောယိုစီးနေသည့်နုန်းဆန်သော (သို့) သဲမြေများသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင်တစ် ဦး မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု၌နေလျှင်, သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလအတွင်းမှတဆင့် beets စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုတောင်ဘက်သို့မျက်နှာပြုသည့်နေရောင်ခြည်တစ်နေ့လုံးရောက်ရှိစေပါ။
ပိုးမသွင်းမီ beet ပျိုးပင်။
မုန်လာဥနီမှမျိုးစေ့များမှစိုက်သောအခါသင်၏ပါးလွှာသောအစေ့များကို ၁″ အနက် ၃-၄″ ခွဲထားပါ၊ သငျသညျအနညျးငယျကလေး beet အစိမ်းရောင်အဖြစ်စားရန်အဘို့အထွက်ပါးလွှာသောစိတ်ထဲမထားဘူးဆိုရင်, သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့ကိုမျိုးစေ့ကိုကြဲနိုင်ပါတယ်။
ပါးလွှာသောအပင်များမှ ၃-၄″ အကွာအဝေးမှအမြင့် ၂ ံသို့ရောက်သောအခါသို့မဟုတ်သူတို့ဒုတိယစစ်မှန်သောအရွက်များပေါက်ရောက်သောအခါ။
ဖြတ်ထားသောမြက်များ၊ ကောက်ရိုးများသို့မဟုတ်ဖျက်စီးရသည့်သစ်ရွက် mulch များနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်သင်၏မြေဆီလွှာကိုစိုပြည်စေသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီဥတုသည်အေးလာသည်နှင့်အမျှအမြစ်များအတွက်လိုအပ်သောနွေးထွေးမှုကိုလည်းပေးသည်။
သင်ဟာအစိမ်းရောင်ပဲအတွက် beets ကြီးထွားလာနေတယ်ဆိုရင်၊ 1/2″ ပါးပါးလေးခြင်းမရှိဘဲနှင့်သင့်အားအစိမ်းရောင်များကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ကြီးမားသောအမြစ်များသည်ဤနီးကပ်ချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသတိရပါ။
Beet အမြစ်များသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။
Beets သည်လွယ်ကူ။ ပျော်စရာကောင်းသောသီးနှံပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အစပြုသူများအတွက်အလွယ်ကူဆုံးအမြစ်သီးနှံအချို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကောက်ပဲသီးနှံများကဲ့သို့ပင်လှည့်ကွက်အချို့ရှိသည်။ သူတို့အားအထောက်အကူဖြစ်စေအရိပ်အမြွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အပေါ်ဖတ်ပါ။
beets ကြီးထွားလာနေစဉ်အကောင်းဆုံးအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်, နေရောင်အပြည့်၌စိုက်။ သင်၏ beets တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်တွင်ကြီးထွားနိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုနည်းအတိုင်းအမြစ်ကဲ့သို့ကြီးထွားမည်မဟုတ်ပါ။
beets သည်အေးသောအပူချိန်ကိုပိုနှစ်သက်ပြီးနေ့ ၆၀-၇၀ ဒီဂရီအပူချိန်တွင်အကောင်းဆုံးကြီးထွားသည်။ ညအချိန်အနိမ့်အမြင့်သည် ၅၀-၆၀ ဒီဂရီဖြစ်သင့်သည်။ ဤသည်ကသူတို့ကိုနွေ ဦး ပေါက်ရာသီသို့မဟုတ်ကြီးထွားမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဖြစ်စေသည်။
beets သည်အေးသောအခြေအနေများကိုသည်းခံနိုင်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မျိုးကွဲများစွာသည်အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီအထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အပူချိန်သည်အေးမြသောရာသီဥတုသို့ကျရောက်သောအခါအမြစ်ပတ်ပတ်လည်၌ mulch ထူသောအလွှာတစ်ခုပေးပါ။ ရေပေါ်အတန်းအဖုံးများသို့မဟုတ် အအေးဘောင် အေးခဲသောအခြေအနေများတွင်ထပ်ဆင့်နွေးထွေးမှုကိုပေးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ beets ရင့်ကျက်မှုအပြည့်အဝရောက်နေပြီဆိုရင်၊ ပြင်ပအပူချိန်ကိုသတိရပါ။ တစ်လကျော် 50 ဒီဂရီအောက်သို့ကျသောအခါရင့်ကျက်သော beets မျိုးစေ့များသွားနိုင်သည်။ သစ်စေ့နှင့်မစားနိုင်သောအမြစ်ကိုထွက်စေ။ မျိုးစေ့အညှောက်မပေါက်မီရိတ်သိမ်းသည်။
beets အတော်များများသည်အရောင်မှောင်လာပြီးအေးသောအခြေအနေများတွင်ချိုလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဆောင်းရာသီတွင်ရိတ်သိမ်းသည့် beets များကိုလူကြိုက်များစေသည်။
မြေဆီလွှာစိုစွတ်စေရန်သင်၏ beets ပတ်ပတ်လည် mulch ထည့်ပါ။
Beets သည်ရေများများနှင့်တူသောကြောင့်အစိမ်းရောင်နှင့်ချိုသောအမြစ်များကိုပြုလုပ်ရာတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်မြူဆိုင်းသောသို့မဟုတ်ရွှံ့ထူသောအခြေအနေများကိုမကြိုက်ကြပါ။
တသမတ်တည်းပင်အစိုဓာတ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ကိုတစ်လက်မလောက်လောက်ရေလောင်းနိုင်တယ်။ မြေဆီလွှာကိုစိုစွတ်အောင်နှင့်အငွေ့ပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် mulching ဖြင့်တွဲထားပါ။
အပူချိန်မြင့်တက်လာလျှင်ရေကိုပိုသောက်ပါ။ သို့သော်သတိထားပါ။ beets ကြီးထွားလာသောအခါစိုထိုင်းဆသင်၏မိတ်ဆွေမဟုတ်ပါ! အစိမ်းရောင်စိုစွတ်စေသော (သို့) မြေမှုန့်များအပေါ်သို့ဖြန်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။ စိုစွတ်သောအရွက်များသည်ရောဂါပြissuesနာများကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရသည်။
ငါအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် soaker ရေပိုက် သို့မဟုတ်အခြားရေစက်ရေပေးစနစ်။ ဤသည် splashback သို့မဟုတ် damp ရွက်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါ့အပြင်သင့်လျော်သောအကွာသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်, အစိမ်းရောင်န်းကျင်လေထုစီးဆင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
Loamy နည်းနည်း - အက်ဆစ်အနည်းငယ်မှအယ်ကာလိုင်းမြေဆီလွှာတွင် beets များစိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသဖြင့်မာကျောသောသို့မဟုတ်ရွှံ့စေးမြေဆီလွှာများကိုရှောင်ပါ။
သင်၌ခဲယဉ်းသောရွှံ့စေးမြေထုရှိပါက၎င်းကိုဖြိုဖျက်ခြင်းဖြင့်သင်၏မြေကိုပြင်ပါ။ သင်တွေ့ရှိသောကျောက်တုံးများကိုထုတ်ယူပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အမြစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်သည်။ မြေဆီလွှာလျှော့ပေးရေးဆွေးအတွက်ရောနှောနေခြင်း။ ၎င်းကိုလေကောင်းလေသန့်ထုတ်ရန်အနည်းငယ်သော perlite သည်ကောင်းမွန်သည်။
သဲမြေဆီလွှာသည်အာဟာရသိပ်သည်းနေသမျှကာလပတ်လုံး beet ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မြေဆီလွှာအဟာရပြည့်ဝအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့်ဆွေးသည်ဤနေရာတွင်လည်းအသုံးဝင်သည်။
သင်၏မြေဆီလွှာ၏ pH သည် ၆.၀ မှ ၇.၅ အကြားရှိ beets များစိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ထိုအကွာအဝေးမှဝေးလံစွာလမ်းမလျှောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
သင့်ရဲ့ beets ပတ်ပတ်လည်အကြီးစားစိုက်ပျိုးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ၎င်းသည်အဓိက beetroot မှထုတ်လွှတ်သောကောင်းသောဆံပင်ပုံစံအမြစ်များကိုနှောက်ယှက်နိုင်သည်။ ပေါင်းပင်များကိုဂရုတစိုက်ဆွဲထုတ်ပါ၊ သို့သော်ဖြစ်နိုင်လျှင်အပင်တစ်ဝိုက်ရှိမြေဆီလွှာကိုမနှောင့်ယှက်ပါနှင့်။
ဖော့စဖရပ်ဖ်မြေကြီးများသည် beets အတွက်အရေးကြီးသည်။ သူတို့ကကောင်းသောအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားပေးနှင့်အပင်ပေါက်ရန်အတွက်မြှင့်တင်ရန်။
သင်၏အပင်များအတွက်ကောင်းမွန်သောဖော့စဖရပ်ရ်ှသည် bat guano၊ ပျော့ပျောင်းသောကျောက်တုံးဖော့စဖိတ်နှင့်အရိုးများပါဝင်သည်။
ပိုတက်ဆီယမ်သည်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ beets များကိုရောဂါများစွာမှကာကွယ်ပေးသည်။
သငျသညျမီးဖိုကနေသန့်ရှင်းသောသစ်သားပြာမှုန်ရှိ (ဆိုလိုသည်မှာအဘယ်သူမျှမ firelog သို့မဟုတ်စက္ကူစွန့်ပစ်နှင့်အတူ Hard သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသောသစ်သားမှပြာ) အချို့သိမ်းဆည်းပါ။ စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုမီပိုတက်စီယမ်ပမာဏတိုးပွားစေရန်မြေဆီလွှာအနည်းငယ်ကိုရောစပ်ပါ။
သတိပေးချက် - သင်၏ pH 6.5 အထက်အထက်ရှိပါကသစ်သားပြာကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ၎င်းသည်သင်၏မြေဆီလွှာ၏ pH ကိုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်စေပြီးအပင်များကြီးထွားရန်ခက်ခဲစေသည်။ သင့်ရဲ့ pH နိမ့်ကျရင်တောင်နည်းနည်းဝေးသွားလို့သတိထားပါ။
နိုက်ထရိုဂျင်သည်လှည့်စားတတ်သောနေရာဖြစ်သည်။ သင်၏ beets သည်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုသူတို့၏အစိမ်းရောင်များကျန်းမာစွာကြီးထွားစေလိုသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည်အပင်အားသန်မာစေပြီးကျန်းမာစေသည့် photosynthesis ကိုကူညီသည်။
ငါ beets မစိုက်ပျိုးမီသင့်မြေဆီလွှာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏မြေဆီလွှာကိုပြုပြင်ရန်သင်ဘာလိုအပ်သည်ကိုသိရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်မျှတသောမြေသြဇာကိုနောက်ပိုင်းတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အိမ်တွင်းမြေဆီလွှာစမ်းသပ်ကိရိယာအစုံပင်လျှင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
beets အတွက်အထူးအရေးကြီးသောအခြားအာဟာရတစ်ခုမှာ boron ဖြစ်သည်။ ၎င်းအာဟာရသည်အမြစ်ပေါ်ရှိအနက်ရောင်အစက်အပြောက်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင်၏ beet အိပ်ရာသို့ borax အနည်းငယ်ထည့်သွင်းခြင်းသည်ဤအာဟာရဓာတ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
သင်၏ beets များကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်သူတို့၏မြေထဲသို့သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သမျှအာဟာရများကိုစားသုံးလိမ့်မည်။ ရာသီအလိုက်မျှတသောအရည်ဓာတ်မြေသြဇာဖြင့်ဘေးချင်းယှဉ်။ ဝတ်ဆင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သူတို့လိုအပ်သည့်အခြားအာဟာရများကိုပေးသည်။
Chioggia beets များကိုရောင်းခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်စိုက်ရမည်။
ကျန်းမာသော beet အမြစ်များသည်မျိုးစေ့မှပြန့်ပွားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အစိမ်းနှင့်အမြစ်များကိုလိုချင်ပါကသင်ကိုယ်တိုင်ကြဲရမည်။
သင်၏ beets ကောင်းစွာအစားထိုးပါလိမ့်မည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအစားထိုးကုသမှုအပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ဤအရာသည်သင့်အားအစေ့များကိုအိုး၌ဖြစ်စေ၊ အိပ်ရာထဲတွင်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။
အစိမ်းရောင်ကိုသာစိတ်ဝင်စားပါသလား ထိုသို့ဖြစ်လျှင်သင်၏ beet root tops များကိုသေးငယ်သောပင်စည်အနည်းငယ်ဖြင့်အမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ အမြစ်ထိပ်ကိုရေတိမ်ပိုင်းထဲထည့်ပြီးနေ့စဉ်ရေပြောင်းပါ။ အစိမ်းရောင်များပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီးငယ်ရွယ်သောအစိမ်းရောင်အပိုသီးနှံတစ်မျိုးရလာသည်။
သင်သည်သင်၏ beets သုတ်သင်ရန်မလိုပါ, ဒါပေမယ့်သင်ချင်ပါတယ်လျှင်သင်ဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့၎င်းသည်သင့်အားလတ်ဆတ်သောအစိမ်းရောင်အရင်းအမြစ်များကိုပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျအစိမ်းရောင်ရိတ်နေလျှင်, ဖြစ်နိုင်သမျှအပြင်ဘက်အရွက်သာရွေးချယ်ပါ။ တစ်ကြိမ်တွင်စက်ရုံ၏အစိမ်းရောင် ၁/၃ ထက် ပို၍ မဖယ်ရှားပါနှင့်။ သူတို့ကိုထိုအပင်မှမရိတ်သိမ်းမီပြန်ကြီးထွားခွင့်ပြုပါ။
beets အဟောင်းများကိုကောင်းစွာအစားထိုးကြဘူး။ သင် beets အဟောင်းများကိုရွှေ့ရန်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုရိတ်သိမ်းရုံသာဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငယ်ရွယ် beets အတော်လေးကောင်းစွာအစားထိုး။ သူတို့စစ်မှန်တဲ့အရွက်၏ဒုတိယ pair တစုံတီထွင်င့်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကအစားထိုးကုသရန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ဆံပင်ပုံသဏ္extာန်ချဲ့ထွင်မှုကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်ရှောင်ပါ။ decomposable အိုးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်ယင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ သတင်းစာ၊ အုန်းသီးကြိတ်သို့မဟုတ်သစ်ဆွေးနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်အိုးများသည်မြေဆီလွှာထဲသို့ကျသည်။
ပြိုကွဲပျက်စီးနေသောအိုးများကိုအသုံးပြုပါကအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခွင့်ပြုရန်အိုး၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုအခြေခံထားပါ။ အဆိုပါ beetroot အရွယ်အစားရောင်ရမ်းအဖြစ်ကပွင့်လင်းအိုးတွန်းပါလိမ့်မယ်။
စိုက်စရာအိုးကိုမသုံးဘူးလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ တစ်ပျိုးပင်ဆဲလ်ဗန်းကိုသုံးပြီးဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် beet တစ်ခုတည်းစိုက်သည်။ သင်ရွှေ့ပြောင်းသည့်အခါပျိုးပင်နှင့်၎င်း၏မြေဆီလွှာအားလုံးကိုညင်သာစွာဖယ်ရှားပါ။ မြေဆီလွှာ (သို့) အမြစ်စနစ်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘဲစိုက်ပါ။
လယ်သမားတစ် ဦး ၏စျေးကွက်တွင်အသစ်စက်စက်ရိတ်သိမ်းထားသော beets နှင့် greens ။
သို့ဖြစ်။ သင်မျိုးစေ့ကိုကြဲပြီးသင်၏အပင်များကိုဂရုတစိုက်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အခုဘာလဲ ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးခြင်း, သင်တန်း! သင့်ရဲ့ beets ရိတ်သိမ်းဖို့ဘယ်လိုကူးကြကုန်အံ့။ ငါသည်လည်းလတ်ဆတ်သောသိုလှောင်မှုကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်လူကြိုက်များထိန်းသိမ်းနည်းစနစ်အနည်းငယ်မျှဝေပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ beet ပျိုးပင်များကိုပိန်စေသည့်အခါပထမ ဦး ဆုံးစပါးရိတ်ရာကာလသည်တကယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားကလေးများအစိမ်းရောင်မလွှင့်ပါနှင့်! အစားသုပ်ပေါ်မှာသူတို့ကိုသုံးပါ။ အခြားအနီးအနားရှိ beet အမြစ်များပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မြေဆီလွှာတွင် beet အစိမ်းရောင်များကိုဖြတ်ပစ်ပါ။
သငျသညျကလေး beets သို့မဟုတ်ငယ်ရွယ် beet အစိမ်းရောင်ချင်တယ်ဆိုရင်, အမြစ်များ 1 about ခန့်အချင်းရောက်ရှိသည်အထိသင်၏ beets အချို့ကိုအရပျ၌ထားခဲ့ပါ။ သင်သည်ထိုအချိန်တွင်အပင်တစ်ပင်လုံးကိုရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ ကလေးငယ်သည် beet root တွင်ပင်စည် ၁ about ခန့်ကိုချန်ထားနိုင်သည်။
အပြည့်အဝရင့်ကျက်သည့် beets များကိုအစိမ်းရောင်နှင့်အားလုံးဖယ်ရှားပစ်သင့်သည်။ အမြစ်ပေါ်တွင်ပင်စည်၏ 1-2 ချန်ထားပါ။
သင်ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်အစိမ်းများကိုသီးရန်ခွဲရန်အကြောင်းကောင်းရှိသည်။ အကယ်၍ သင်မပြုလုပ်ပါကအစိမ်းရောင်သည်အမြစ်မှအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူပြီး၎င်းအားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပင်စည်တိုကိုထားရှိခြင်းသည်အမြစ်မှ“ သွေးထွက်ခြင်း” ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
သင့်ရဲ့အသုပ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲရန်အစိမ်းရောင်အနည်းငယ်ရိတ်လိုလျှင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက“ တံစဉ်များကို” ဖတ်ပါ။ စက်ရုံ၏ ၁/၃ ထက် ပို၍ ရိတ်သိမ်းခြင်းမပြုရန်သတိရပါ။
လှော်ထားသည့် beets များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ချက်ပြုတ်ပြီး ၂ ရက်ခန့်သိမ်းထားနိုင်သည်။
သငျသညျ beets တစ်ခုကျေးဇူးရှိပါကသိုလှောင်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ သငျသညျလတ်ဆတ်သော beets ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်အမြစ်မြေအောက်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
သိုလှောင်ခြင်းမပြုမီအစိမ်းရောင်အကွက် ၁-၂″ တိုတိုချောင်းကိုချန်ထားပြီးအစိမ်းရောင်အားလုံးကိုချွတ်ပါ။ beet ရဲ့မျက်နှာပြင်မှတွယ်ကပ်နေမည်သည့်မြေဆီလွှာကိုချွတ်ဖုန်မှုန့်။
သင်၏ beet အစိမ်းများကိုစက္ကူလက်သုတ်ပုဝါအလွှာများအကြားတံဆိပ်ခတ်။ zip-top အိတ်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ အိတ်ထဲရှိပိုလျှံသောလေထုကိုထုတ်ထုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၂ ရက်အထိသိမ်းထားပါ။ သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးလတ်ဆတ်ပေမယ့်ရေတိုသက်တမ်းရှိသည်။
Beet အမြစ်များကိုလေနှင့်ဖိ။ တံဆိပ်ခတ်ထားသော zip-top အိတ်ထဲတွင်သိမ်းနိုင်သည်။ သူတို့ကို ၇-၁၀ ရက်အထိရေခဲသေတ္တာ၏အံဆွဲထဲထည့်ပါ။ ချက်ပြုတ်ထားသော beets များကိုအလုံပိတ်ကွန်တိန်နာတွင် ၁-၂ ရက်ခန့်အအေးခံနိုင်သည်။
root cellar သိုလှောင်မှုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ရေပုံးကြီးကိုရှာ။ အောက်ခြေ၌သွေ့ခြောက်သောသဲများကိုချထားပါ။ ထို့နောက် beets အလွှာတစ်ခုကိုထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ beets အားလုံးဖုံးလွှမ်းနေသည်အထိသဲနှင့် beets ၌အလွှာကိုဆက်လက်။
သဲခြောက်သွေ့တဲ့သဲမရှိရင်သစ်သားရိတ်သိမ်းခြင်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ သစ်သားရိတ်ဟောင်းများကိုမသုံးမီအပင်သေးသေးလေးကိုသုတ်လိမ်းသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ထုတ်ကုန်များမှအစိုဓာတ်ကိုများစုပ်ယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
သင်ကဖြတ်သို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးပဲ beets အေးခဲနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်၏ beets ကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ရဲ့ယခုသူတို့အားကျော်သွားကြကုန်အံ့!
သင်၏ beets ကိုအေးခဲစေခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ beets ကိုအေးခဲစေရန်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သူတို့ကိုသင်ဖြတ်တောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အေးခဲစေနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်များအားလုံးကိုခြောက်သွေ့စေပြီးဖယောင်းစက္ကူဖြင့်ခင်းထားသောနံရံပေါ်၌တင်ထားပါ။ အဆိုပါ beets ကျောက်ခိုင်မာသောမှီတိုင်အောင်အေးခဲ။ လေလုံကွန်တိန်နာသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာအိတ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ပါ။
စည်သွပ်ဗူးသည်နောက်ပိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက် beets ကိုချွေတာခြင်း၏အခြားလူကြိုက်များသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရေထဲမှာ beets အဘို့, သင်ကဖိအား canner အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Beets များသည်အက်ဆစ်ဓာတ်နည်းသောအစားအစာဖြစ်ပြီးရေရေချိုးကန်တွင်သူတို့လုပ်နိုင်သောအရာများမှမလုံခြုံပါ။
ရှလကာရည်အခြေခံပြီးချဉ်သော beets ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်အချဉ်ဓာတ်တိုးနိုင်သည်။ သင်၏ beets များကိုချဉ်ပါကနောင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရေချိုးနိုင်သည်။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း (သို့) အေးခဲစေသောခြောက်သွေ့ခြင်းများသည်ရေပန်းစားသည်။ သငျသညျ beet ချစ်ပ်အောင်နေလျှင်, ပထမ ဦး ဆုံး beets ချက်ပြုတ်, ထို့နောက်အချပ်နှင့်ခြောက်သွေ့။ beets များသိုလှောင်ရန်အတွက်ဟင်းချိုနှင့်စွပ်ပြုတ်များထဲသို့ထည့်ရန်၊ သင်သည်သူတို့ကိုအခြောက်သို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်နိုင်သည်။
beets ကြီးထွားလာနေစဉ်ပြproblemsနာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဒီမှာကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ပိုးမွှားများသို့မဟုတ်ရောဂါများအပြင်၊ အမြားဆုံး beet ပြproblemနာသည်အနက်ရောင်နှလုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ beet black spot ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်မြေဆီလွှာထဲတွင်ဘိုရွန်ဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနက်နှင့်သစ်သားအစက်အပြောက်အမြစ်ပေါ်နှင့်သို့ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။
ဤအစက်အပြောက်များသည်သစ်သားနှင့်အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်အစာမစားမှီခွာရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုတားဆီးရန်အတွက်မစိုက်ပျိုးမီဘိုရွန်အဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သင်အနည်းငယ်သော Borax ပမာဏကိုသင်၏မြေသို့ထည့်နိုင်သည်။ စိုက်ပြီးတာနဲ့ပင်လယ်ရေမှော်ထုတ်ယူသုံးပါသို့မဟုတ်ဘိုရွန်အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့ဆွေးထည့်ပါ။
Leafhoppers နှင့် aphids တို့သည် beets အတွက်ပြproblemနာနှစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုးမွှားအနည်းငယ်သည်သာ beets ကြီးထွားလာစဉ်ပြproblemနာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤတွင်သူမြားကိုပေါ်လာဖွယ်ရှိများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်များထဲမှများစာရင်းကိုပဲ!
အန္တရာယ်အရှိဆုံးပိုးမွှားနှစ်မျိုးမှာရောဂါပျံ့နှံ့စေသည်။ Aphids နှင့် ပန်းချီဆရာ စိမ်းလန်းစိုပြေသော beet အစိမ်းရောင်နှစ်မျိုးလုံးသည်အဓိကအစားအစာဖြစ်သည်။
aphids နှင့် leafhoppers တိုက်ခိုက်နေသည့်အခါသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ သင်၏ beet အစိမ်းအရွက်များနှင့်အရွက်များ၏မျက်နှာပြင်များအားလုံးဖြန်းခြင်း ဆီယူပါ ဤပိုးမွှားပင်လယ်အော်မှာစောင့်ရှောက်။
ခုခံကာကွယ်ဖို့နည်းနည်းပရိယာယ်ရှိပါတယ် အရွက်မိုင်းလုပ်သား ။ ပိုးမွှားများ၏ပိုးလောင်းများသည်နူးညံ့သောအပင်တစ်သျှူးကိုစားသုံးစဉ်တွင်သစ်ရွက်များပေါ်၌ဝင်္ကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
လောင်းလောင်းများကိုအရွက်၏မျက်နှာပြင်၌စုပ်ယူထားသဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆီယူပါ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွက်မိုင်းလုပ်သားများကိုပင်လယ်အော်၌စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လည်းကူညီနိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအတွက် spinosad မှုန်ရေမွှားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ Monterey ဥယျာဉ်အင်းဆက်ပိုးမှုတ်ဆေး ။
nematodes အမျိုးအစားနှစ်မျိုးသည်အမြစ်ကိုပျက်စီးစေသည်။ The beet cyst nematode အဆိုးဆုံးကတော့၎င်းသည်အပင်များနှင့် cyst- ကူးစက်ခံရသည့်အမြစ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဝါရောင်နှင့်ညှိုးနွမ်းရွက်သစ်ရွက်များလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အမြစ်ထုံး nematodes အထူးသဖြင့်ပူသောရာသီဥတုတွင်အဝါရောင်နှင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
တိုက်ပွဲများ nematodes မြေဆီလွှာအဆင့်မှာပြုရမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် အကျိုးရှိသော nematodes သင့်ရဲ့မြေဆီလွှာရန်။ ဤအထောက်အကူပြုသော nematodes များသည်အန္တရာယ်ရှိသောသူများကိုသေစေပြီးသင်၏အပင်များကိုဘေးကင်းစေလိမ့်မည်။
နှစ်ခုလုံး ခွေးလှေး နှင့် မက္ကဆီကန် beetles သင့်ရဲ့ beets ၏အရွက်အရိုးစုပါလိမ့်မယ်။ အနည်းငယ်သောအရွက်သောပစ္စည်းများကိုကျန်ကြွင်းစေလိမ့်မည်!
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Spinosad မှုန်ရေမွှား Monterey ဥယျာဉ်အင်းဆက်ပိုးမှုတ်ဆေး ဤအဆန့်ကျင်အတန်ငယ်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ငါ pyrethrin မှုန်ရေမွှားကြိုက်တယ် အန္တရာယ်ကင်းသောအမှတ်တံဆိပ် Yard & ဥယျာဉ်မှုန်ရေမွှား ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ မှောင်မိုက်ကောင်လေးတွေ သင်၏အပင်များ၏အဓိကနှင့်ငယ်ရွယ်သောပျိုးပင်များကိုကျွေးနိုင်သည်။ ဤပိုးတောင်မာများ၏လောင်းများမှာ ချစ်သူ ကြက်များ၏အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ! သင့်တွင်ကြက်များရှိပါကသင်၏မှောင်မိုက်နေသောပိုးတောင်မာလူ ဦး ရေသည်၎င်းတို့ကိုမျိုချလိုက်သဖြင့်အရေးမကြီးတော့ပါ။
ကြက်မလား ပြဿနာမရှိပါဘူး။ မှောင်မိုက်နေသောပိုးတောင်မာများသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ရေမှုန်ရေမွှားနှစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဒီပိုးတောင်မာသုံးမျိုးလုံးကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ် ဆီယူပါ အားလုံးအထက် - မြေပြင်စက်ရုံမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။
cercospora အရွက်အစက်အပြောက်လက္ခဏာတွေနှင့်အတူတစ် ဦး က beet ။
ခရမ်းရောင် - အနီရောင်အစက်အပြောက်များသည်ပထမဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သည် cercospora အရွက်အစက်အပြောက် ။ နောက်ဆုံး၌ဤအစက်အပြောက်များသည်အညိုရောင်ဖြစ်လာပြီးခြောက်သွေ့သွားပြီးအရွက်များမှကျလာပြီးတွင်းများနှင့်ကျုံ့သွားစေသည်။
သင်ဤဖန်းဂတ်စ်အရွက်အစက်အပြောက်နှင့်အတူစစ်တိုက်နိုင်သည် Serenade ဥယျာဉ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမှုန်ရေမွှား ။ OMRI မှအသိအမှတ်ပြုထားသောဤအော်ဂဲနစ်မှုန်ရေမွှားသည် spac ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်စေသောဘက်တီးရီးယား subtilis ပါ ၀ င်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ပျက်စီးနေသောအရွက်များကိုဖယ်ရှားပါ။
damping ပျိုးပင်များပြိုကျခြင်းနှင့်သွေ့ခြောက်သောအမြစ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပျိုးပင်၏ပင်စည်ကိုပိုးမွှားများကဝါးစားသကဲ့သို့ကြည့်နိုင်သည်။ Rhizoctonia နှင့် pythium မှို ဒီရောဂါအတွက်အပြစ်တင်ဖို့ရှိပါတယ်။
ခေါ်ထုတ်ကုန် ကျွနုပ် damping ဆန့်ကျင်ထိရောက်သောဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကပြသနေသည်။ ရေနှင့်ရောပြီးသည်နှင့်မှိုဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကာကွယ်ရန်သစ်ရွက်များပေါ်သို့ပက်ဖျန်းပေးသည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးပြီးသောအပင်များကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Fusarium beets တွင်အဝါရောင်နှင့်အမြစ်တွယ်နေသောအခြားဖန်းဂတ်စ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွနုပ် ဤနေရာတွင်ကာကွယ်နည်းအဖြစ်နောက်တဖန်အသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့် fusarium ပိုပြီး Insidious ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမြေကြီးထဲ၌နေနိုင်သည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဒီရောဂါနှင့်အတူအရေးကြီးပါသည်!
Aphanomyces အမြစ်ပုပ် ဒါကြောင့်အိမ်ဥယျာဉ်၌လျော့နည်းဘုံင်ပေမယ့်မကြာခဏသကြား beets ရိုက်။ ၎င်းသည် beet အမြစ်တလျှောက်ရေပြတ်သွားသည်။ ၎င်းသည် oomycete ဖြစ်သောရေကြောင့်ဖြစ်ပွားသောရောဂါပိုးများကြောင့်ဖြစ်ပွားသောကြောင့်တိုက်ခိုက်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
အစောပိုင်းလယ်ကွင်းလေ့လာမှုများကြောင်းပြသလျက်ရှိသည် ကုန်ပြီထုံး သကြားဘီယာလုပ်ငန်း၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းသည်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ Lime သို့မဟုတ် calcium carbonate သကြားမထုတ်လုပ်မီသကြားရည်ဖျော်ရည်ကိုသန့်စင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်ကုန်ပြီထုံး aphanomyces ဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်လယ်ပြင်သို့အလုပ်လုပ်သည်။
သင်၏ဥယျာဉ်များ၌ထုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤအမြစ်များပုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသော်လည်းသင်၏မြေဆီလွှာ pH ကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သငျသညျအထူးသသကြား beets ကြီးထွားလာမဟုတ်ပါဘူးလျှင်, သင် aphanomyces ကြုံတွေ့ရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
အမှုန့်များအနာ နှင့် downy အနာ နှစ် ဦး စလုံး beet အစိမ်းရောင်အပေါ်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ အမှုန့်များသောအနာသည်အရွက်များပေါ်တွင်အဖြူရောင်၊ ဖုန်မှုန့်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Downy အနာသည်မီးခိုးရောင်အထူးဖော်စပ်ထားသည့်အရွက်များပေါ်တွင်ပေါက်ရောက်သည်။
အနာနှစ်မျိုးလုံးသည်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းရှိသည်။ အတူပက်ဖြန်း Monterey Liqui-Cop သို့မဟုတ်အခြားကြေးနီအခြေပြုမှိုများသည်ဤရောဂါများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဆီယူပါ တစ် ဦး ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားရွက်အစက်အပြောက် အရွက်ပေါ်တွင်အဝါရောင်မှအညိုရောင် splotches ။ နောက်ထပ်ဘက်တီးရီးယားပြproblemနာ အနာဖေး , အမြစ်များပေါ်တွင်မီးခိုးရောင်အဖြူသို့မဟုတ် tan အစက်အပြောက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤဘက်တီးရီးယားရောဂါများကိုကုသနိုင်သည် Serenade ဥယျာဉ် ။ အရွက်အစက်အပြောက်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူကာကွယ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ် ဆီယူပါ ဒါပေမယ့်အနာဖေးကပို Insidious ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဖေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကာကွယ်ရန်ခြောက်သွေ့သောမြေဆီလွှာအခြေအနေများကိုရှောင်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ beets ကိုထိခိုက်နိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်တစ်စုံရှိပါတယ်။
Beet ကောက်ကောက်ထိပ်တန်း အဆိုပါ beet leafhopper အားဖြင့်ပြန့်နှံ့သည်။ ဤရောဂါကြောင့်အရွက်များကအခွံခွာ။ အတွင်းသို့ကျသွားတတ်သည်။ ၎င်းသည်အဝါရောင်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်သစ်ရွက်အရောင်ပြောင်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအရွက်နှင့်အမြစ်ကြီးထွားမှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
beet အနောက်အဝါရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး aphids အားဖြင့်ကူးစက်သည်။ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်အရွက်များပေါ်ရှိသွေးပြန်ကြောများနှင့်တခါတရံတွင်နီညိုရောင်အစက်အပြောက်များအဝါရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရွက်များသည်သံချေးဖြင့်ကြည့်။ ထူနိုင်သည်၊
ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနှစ်ခုလုံးတွင်လက်ရှိကုသမှုမရှိပါ။ ပိုးမွှားတားဆီး ဒီရောဂါတွေပျံ့နှံ့ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ပေါင်းပင်များကိုဖယ်ရှားခြင်း ၎င်းသည်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့ကိုဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။
A: နည်းနည်းလေးမှအန္တရာယ်မရှိဘူး။ beets အနီရောင်တွင်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပွားနေသော betanin ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်သည်။ ဒါဟာအရသာအရောင်နှင့်အရသာအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ မကြာသေးမီက၎င်းကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှောင်မိုက်သော fuschia အရောင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သဖြင့်အချိုပွဲများကိုအရောင်တင်ရန်လူကြိုက်များလာသည်။
သို့သော်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အခြားအစားအစာဆိုးဆေးများကဲ့သို့ betanin ကိုမချိုးပါ။ Beeturia ဆိုသည်မှာသင်၏ဆီးသို့မဟုတ်ထိုင်ခုံမှတစ်ဆင့်ပိုလျှံသော betanin များဖြတ်သန်းခြင်းကိုပေးသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်အနီရောင် ဖြစ်၍ သင်၏မစင်များကိုပန်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်က၎င်းကိုမမျှော်လင့်ပါက၎င်းသည်အနည်းငယ်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်လာနိုင်သည်။
အချို့လူများသည် betanin ကိုအခြားသူများထက် ပို၍ အလွယ်တကူ metabolize လုပ်သည်။ အခြားလူများသည်အသုပ်တစ်ခုတွင် beet အနည်းငယ်ချော်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ပန်းရောင်ပဲရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ထိတ်လန့်မနေပါနဲ့! ဒါဟာသင် beets သို့မဟုတ်ထိုတွင် beet ထုတ်ယူနှင့်အတူတစ်ခုခုစားသောနိမိတ်လက္ခဏာကိုသာ။
သင်၏အနာဂတ်၌ beets တစ်အမြောက်အမြားရှိနိုင်ပါသည်! သင်အကြိုက်ဆုံး beet မျိုးရှိပါသလား သငျသညျ beet အစိမ်းရောင်ကိုနှစ်သက်ပါသလားသို့မဟုတ်ချိုမြိန်သောအမြစ်များကြိုက်လား? ငါ့ကိုမှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်သိပါစေ!